एक सय १६ किमी बाटाेकाे भाडा करिब २५ सय | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार २३:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । यातायात व्यवसायीले जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन् । एक सय १६ किलोमिटर सडकमा दुई हजार तीन सय ५० रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् । यति भाडा असुले पनि यात्रुलाई भने कम्ता सास्ती छैन । ठाउँ–ठाउँमा ओर्लेर हिँड्नुपर्छ । यो सडकखण्डमा ट्र्याक खुलेसँगै गाडी चल्न थालेपछि यात्रु झन् मारमा परेका हुन् ।
जाजरकोटदेखि डोल्पा पुग्न विभिन्न सिधै गाडी चल्दैन् । खण्ड–खण्डमा यात्रा गर्नुपर्छ । जाजरकोट सदरमुकामदेखि तल्लुसम्म सात सय भाडा लाग्छ । त्यसपछि सात सय रुपैयाँमै रुकुमको अनाहदेखि डोल्पाको करबगाडसम्म पुगिन्छ । करबगाडदेखि खदाङसम्म पुग्न फेरि एक सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यहाँबाट त्रिपुराकोटसम्म पुग्न अर्काे गाडी चढ्नुपर्छ । खदाङदेखि त्रिपुराकोटसम्म चार सय भाडा लाग्छ । त्यसपछि सुपानीदेखि दुनै पुग्न चार सय भाडा तिर्नुपर्छ ।
‘भाडा चर्को छ, यात्रु ठगिएका छन् । स्थानीय सरकार केही बोल्दैन,’ जाजरकोटको नलगाडका बद्री पन्तले भने । यसरी चर्को भाडा लिँदा यात्रुलाई टिकट भने दिने गरिएको छैन । स्थानीय प्रशासनसँग उजुरी गर्ने डरले टिकट नदिने गरिएको यात्रुको भनाइ छ ।
नेपालमा भारतीय चासाे बढ्याे, राजदुतकाे अस्वभाविक दाैडधुप किन ?
काठमाडौं । नेपालकाे राजनीतिमा हस्तक्षपकारी भूमिका खेलेकाे भारतले फेरी अाफ्नाे चाँसाे अस्वाभाविक…
दार्चुला । मालिकार्जुन गाउँपालिकाको तेर्छालेकमा गत मंसिर ७ गते भएको मिनिबस दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भयो भने आधा दर्जन…
बागलुङमा पहिरोले पुरिँदा एकजनाको मृत्यु, आठ घर पुरिए
बागलुङ । मंगलबारदेखि परेको अबिरल बर्षाका कारण पहिरो जाँदा जलजला गाउँपालिका–८ नाङ्लिबाङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरो…
काठमाडाैं । पत्यकाभित्र ड्युटीमा रहेका प्रहरीलार्य घुस दिन खोज्ने एक सय १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ…
काठमाडाैं । कृषि सामग्री लिमिटेडले रासायनिक मल खरिद गर्न भन्दै सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । कम्पनीले…
शीतल निवासबाट सोझै सर्वोच्चमा कसरी जान्छ सूचना ?
काठमाडौं । संवैधानिक अंगहरुले एक अर्काप्रति अविश्वास गर्ने अंकुश लगाउने र आपसी…